EU Flat PRODUCT vy PRICE fantina AVY MEPS - China Ningbo Ke Ming milina
EU Flat PRODUCT vy PRICE fantina FROM MEPS
Zavatra soatoavina fototra nitsangana, tamin'ny Aogositra / Septambra, noho ny famerana ny habetsahan'ny fitaovana azo avy any ampitan-dranomasina na Eoropeana sy ny mpamokatra. Araka ny fanontana MEPS farany Eoropa Steel Review, famatsiana Mijanona ho voafetra, indrindra ho an'ny mifono vokatra, miaraka amin'ny fanaterana fotoana hitarika ho any amin'ny faran'ny taona sy ny mihoatra. Service boloky hazo foibe no fampihenana haingana toy ny maro faran'ny-mpampiasa, izay mazàna hametraka mivantana ny raharaham-barotra tamin'ny fikosoham-bary, dia mividy avy amin'ny mpizara mba hahazo vy haingana kokoa.
Zavatra service foibe famatsiana tightness tatitra. Na izany aza, ny sisiny mbola ho voaporitra. Fa ny fotoana, mpanjifa no misalasala ny vola bebe kokoa. Ny fizarana ny sehatry manana fahafahana be loatra sy ny maro dia mbola mivarotra stockists tena mahery vaika.
Ao amin'ny UK, esory ny ankamaroan'ny orinasa ny vidin'ny vokatra nandroso, amin'ity volana ity, toy ny kontinanta eoropeanina mpamokatra nanainga soatoavina fototra mba offset ny malemy kokoa Sterling farantsa. Mpamatsy ireo ankehitriny miresaka ny fiakaran'ny fanampiny. Mpizara indrindra dia mitombo ny fampiharana ny fikosoham-bary, ka sisiny no azo ekena. Stocks ambany noho ny famatsian shortfalls. Tsy mahita fisian'ny kely avy amin'ny mpivarotra.
Belza mpividy nilaza fa ny manosika ho amin'ny vidin-javatra ambony dia tsy hita taratra misy fitomboana toy izany koa amin'ny fangatahana, na dia fanompoana foibe varotra ara-drariny no tsara. Mba Mill boky, esory ny ankamaroan'ny vokatra fikosoham-bary, dia feno ny Desambra, na mihoatra mihitsy aza. Be dia be voafetra ary misy fahatarana eo amin'ny fanaterana efa ela mitarika fotoana. Mpizara tatitra fa ny vidin-javatra ambony fitotoam-bary tsy azo ampiharina amin'ny soatoavina Fivarotana fanindroany amin'ny toe-javatra rehetra.
Ny hita tsy fisian'ny antony nahatonga ambony isa ao Espaina. Service foibe dia manahy fa ny mpanjifa dia ampahany ihany no hanaiky ny fikosoham-bary fiakaran'ny. Misy mpividy mialoha fa ny tahirin-olana azo vahana amin'ny alalan'ny 2017. lafiny voalohany tsy ny kely indrindra, satria competitively-priced fanafarana ireo amin'ny tolotra avy amin'ny firenena maro fahatelo loharanom-baovao, fa tsy fiantraikany eo amin'ny antidumping fepetra.
Post fotoana: Aug-13-2018